SUDAN: Maxkamadeynta Madaxweynihii Hore Cumar Al Bashiir – somalilandtoday.com
(SLT-Khartoum)-Madaxweynihii hore ee dalka Sudan Cumar Al Bashiir ayaa Axadii la horgeeyey xafiiska xeer illaalinta oo kusoo oogtay danbiyo la xariira musuq maasuq iyo dhaca Hantida Qaranka.
Cumar Al Bashiir oo hada ah 75 sano jir ayaa waxaa garbaha ka socday ciidamo badan oo illaalo ah oo kasoo kaxeeyey xabsiga lagu hayo ee Kobar oo ku yaal duleedka caasimada Khartuum.
Xeer illaalinta ayaa u akhrisay Cumar Al Bashiir dhamaan danbiyada loo heysto iyadoo sidoo kale su’aalo dheeraad ah laga weydiiyey danbiyada la xariira musuq maasuqa, waxaana la siiyey muddo hal asbuuc ah inuu jawaab ka bixiyo danbiyada loo heysto, hadii uu ku guuleysan waayo waxaa loo gudbinayaa maxkamada dalkaasi oo bilaabi doonta dhageysiga danbiyada lagu soo oogay.
Danbiyada loo heysto Cumar ayaa waxaa kamid ah in gurigiisa laga helay lacag gaareysa 113 milyan oo dollar, arrintan oo jabineysa sharuucdii uu dhaqan geliyey isla Cumar Al Bashiir.
Bishii Feberaayo ee sanadkan xili ay dalkaasi ka socdeen rabshado ka dhashay sicir bararka iyo maciishada qaaliga noqotay ayuu xiligaasi Cumar Al Bashiir amar ku bixiyey in la xiro qofkii lagu qabto in ka badan 3.000 lacagta qalaad, kadib markii xukunka laga tuuray bishii April ayaa baaritaan lagu sameeyey gurigiisa laga helay in ka badan 113 milyan oo dollarka Maraykanka ah.
Mucaaridka Sudan ayaa u arka kiiskan Cumar Al Bashiir uusan ahayn maxkamad cadaalad ah balse militariga doonayo inuu isaga sii jeediyo xiisada dalkaasi ka taagan iyo dilalkii ay ciidamada geysteen horaantii bishan oo Golaha Militariga usoo jiiday cambaareynta Beesha Caalamka.
Militariga Sudan ayaan weli go’aan ka gaarin in Cumar Al Bashiir ay u gacan gelin doonaan Maxkamada Caalamiga ah ee Danbiyada Dagaal ICC oo horey ugu soo eedaysay Madaxweynihii hore ee Sudan danbiyadii ka dhacay dagaaladii gobalka Darfur iyo xasuuqii ay geysteen ciidamadiisa, balse isla maxkamadaasi ay danbiyo kuwaasi lamid ah kusoo oogtay xubno sar sare oo kamid ah Taliska Militariga ee hada weli maamulaya wadanka Sudan.
Waxaa xusid mudan ciidamada loo yaqaan (Gurmadka Deg Deg ah) ee horaantii bishan June dilalka u geystay shacabka mudaharaadka ka wada caasimada Khartuum ay u badan yihiin maleeshiyaadkii la oron jiray (Janjawiidka) ee uu Cumar Al Bashiir u adeegsaday dagaalkii gobalka Darfur, ciidamadan ayaa si toos ah u hoostaga Gen. Mohammed Hamdan Dagalo oo ah Kuxigeenka Taliyaha Militariga oo kamid ah xubnaha ugu awooda badan Golaha Militariga ee la wareegay xukunka dalkaasi.